Apple yakasiya musika wemaoresa smartwatches asi Tag Heuer flips musoro | Ndinobva mac
Apple yakabuda mumusika wakasarudzika smartwatch asi Tag Heuer akabaya pamusoro wayo
Apple payakaunza iyo Apple Watch, makuhwa apfuura akasimbiswa kuti iyo Cupertino-yakavakirwa kambani yaida kupinda mukati meindasitiri yemafashoni. kuvhura shanduro dzinoverengeka dzakasarudzika dzakagadzirwa negoridhe.
Aya mamodheru, ayo akatanga kubva ku10.000 pamwe nemitero, aive nerwendo hupfupi, kubvira achigadzirwa nesimbi yakakosha, aifanirwa kukumbira mvumo chaiyo munyika yega yega kuti agone kuitengesa, mvumo iyo yaasina kuwana mazhinji nyika, kusanganisira Spain. Mwedzi yakati wandei mushure mekutanga kwayo, zvakavatora kubva pamusika.
Nekudaro, kunyangwe hazvo kukundikana kwemuenzaniso uyu, mune yakasarudzika chikamu tinowana mumwe mugadziri akatoita foray yapfuura munyika ye smartwatches neTag Heuer Yakabatanidzwa 45, smartwatches ine mutengo wemusika uyo unosvika 2000 euros. Asi, pamwe inokurudzirwa nekutengesa kwakaitwa nemuenzaniso uyu, iyo Swiss femu yakabheja hombe uye yakapa smartwatch inodhura kwazvo pasirese. Tiri kutaura nezvazvo Tag Heuer Yakazara Daimondi, chishandiso chinosvika pamusika mwedzi unouya che $ 197.000.
Sezvazviri pachena kubva pazita, uye zviri pachena kubva pamutengo, uyu modhi unotipa anodarika mazana matatu emadhaimani anoparadzirwa neese ari maviri Korona uye tambo. Siwe zvemukati zvakangofanana neSmarwarch Yakabatana 45, ine GPS, NFC chip, sensor yemoyo ... mukati medu tinowana processor inogadzirwa neIntel uye iyo inoshanda system haigone kuve imwe kunze kweiyo Android Wear, inoshanda sisitimu ichine zvakawanda zvekuvandudza maererano nekubatana kwayinotipa. iine iyo iPhone, iyo inoganhurira munda wayo wekuita kune vashandisi vane iyo Android terminal, kunze kwekunge iko kushandisa wue s kuenda kwekugadzira iyo ndeyokuzivisa uye zvishoma zvimwe.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » Noticias » Apple yakabuda mumusika wakasarudzika smartwatch asi Tag Heuer akabaya pamusoro wayo
Inguva inguva yawakanakidzwa nemutambo wetambo tambo pamutengo unodhura